Rajesh Natansh | Nepali Stories
Rajesh Natansh – Mera Patraharu Sanga Ko Raat
राजेश नतांश – मेरा पात्रहरूसँगको रात
चिसो हावा आफ्नै गतिमा प्रवाहित भइरहेको छ । सडकहरू सुनसान छन् । सडक छेऊका हाइपावरका सडक बत्तीहरूले सडक उज्यालो पारेका छन् । सडक बत्तीहरूमा पुतलीहरू झुम्मिरहेका छन् । लाग्छ त्यहाँ एक प्रकारको मोहनी मन्त्र लगाइएको होस् र त्यो तेजिलो प्रकाशमा त्यो तातो रापमा आफ्नो आहुति दिँदै छन तिनीहरू । आफ्नो प्राण पखेरु कतिखेर सिद्धिने हो अन्जान छन् उनीहरू । यस्तै दृश्यमा अनायासै म हराउन पुग्छु । चिसो हावाले मलाई र्स्पर्श गर्छ । शरीरमा चिसा तरङ्गहरू फैलिन्छन् । मलाई एक प्रकारको आनन्दको महसुस हुन्छ ।
मलाई आज घर जान मन लागेको छैन । मेरा पाइलाहरू चल्न चाहँदैनन् । सडक सुनसान छ । एकाध मान्छेहरू आफ्नो गन्तव्य पथमा लम्कदैछन् । आसपासका पसलहरू बन्द हुने तरखरमा छन् । यस्तै वातावरण आज मलाई प्यारो लागिरहेको छ । हजारौंको भागदौड, दौडधुप र तिखो कर्कस ध्वनीले अस्तव्यस्त हुने सडक, यतिखेर शान्त छ । अनायासै आज म यो सडकलाई नियालिरहको छु । जीवनको ४० औं बसन्त पार गरीसक्दा आजसम्म पनि मैले यस्तो अनुभव गरेको थिइन । मेरा जीवनका विम्बहरूले मलाई घेर्छन् ।
जीवनको अर्थपूर्ण यात्रा मैले यै सडकबाट गरेको थिएँ । म यो सडकको गल्ली-गल्ली हिँडेको छु । मैले प्रत्येक पल यही सडकमा बिताएको छु । मैले कैयौँ ऋतुहरू यही सडकमा फेरेको छु । आज मलाई यही सडक प्यारो लागिरहेछ । मलाई अतीतका पलहरू सम्झदाँ भयावह लाग्छ । अनि आफैँ झस्कन पुग्छु, तर्सन पुग्छु ।
“एक्लै हो दाइ ?”
म एक्कासि झस्कन्छु । अन्दाजी २०/२५ वर्षी जस्ती देखिने प्रौढ युवती मेरो नजिक आईपुग्छे । छोटो मिनीर्स्कर्ट र टिर्सटमा सजिएकी अनि यौवनले भरिपूर्ण भएकी ऊ वाचाल छे । अनकन्टार जस्तो लाग्ने यो मध्यरातमा मेरो नजिक आइपुग्दा म छक्क पर्छु ।
“अँ ! बैनी एकैछिन चौतारीमा बसेर आराम गरेको ।”
“कहाँबाट आउनु भा’को ? जाऊ हिँड्नुहोस् मेरो गेष्ट हाउसमा । आज मलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् ?”
“घर नजिकै छ । तर मैले तिमीले भनेको कुरा बुझिन ?”
“बुझी-बुझी कस्तो बुझ पचाएको ! (छेऊमा टाँसिएर बस्छे ।) मात्र पान सय हो क्या ! रातभर फूल्ली स्याटिस्फाई गराउछु !”
“ओ ! बैनी तिम्ले मलाई गलत बुझयौं । तिम्ले सोचेजस्तो मान्छे म होइन । म बिवाहित हुँ ।”
“बिहे गरे बाल भयो र ! हिँड्नु न ‘डिस्काउन्ट’ गरिदिन्छु क्या ।”
“‘एक्सट्रेम्ली सरी बैनी’ तिमीलाई चाहिँएको भएँ । यो ५ सय लैजाउँ ।”
हत्तपत्त पैसा हातबाट लिँदै ऊ आफ्नो बाटो लाग्छे । म घोत्लिन पुग्छु, आफ्नै संसारमा । साँच्चै जीवनपथका हरेका बाटोहरू थुनिँदा मान्छे लाचार बन्दो रै’छ । परिस्थितिसँग मान्छे हार्दो रहेछ । अनि बाँच्नकै लागि जत्रो ठूलो खतरा पनि मोल्न पछि पदैन मान्छे । आजकल समय बद्लियो, मान्छे प्रतिस्पर्धी भए भनिन्छ । आखिर जीउने आधार नै नभए के प्रतिस्पर्धाको कुरा !, के इज्जतको कुरा ! अनि के अस्मिताको कुरा ! बाँच्नकै लागि मान्छे जीवनको दाउपेज लगाउँदो रहेछ । मेरा स्मृतिपटलमा यही कुराहरू आउँछन् ।
“सर ! २० रुपैयाँ दिनु न !!”
अन्दाजी १५/१६ वर्षो जस्तो देखिने केटो मेरो अगाडि आइपुग्छ । थोत्रो र महिँलो लगाएको जस्तो देखिने ऊ । आफ्नो हात पसारेर मलाई केही माग्दैछ । म त्यस केटामा हराउन पुग्छु । मेरो ध्यान उसप्रति आकृष्ट हुन्छ ।
“किन चाहियो तिमीलाई २० रुपैयाँ, अनि तिमी को हौ ?”
“हजुर ! म बर्खे । त्यो टेम्पुमा काम गर्छु आज बन्दले टेम्पु चलेन । केही खा’को छुइन । तपाईलाई धन्य हुन्छ सर ! आज मेरो पेट भरिदिनुहोस् !!”
म आफैँमा हराउन पुग्छु । मेरा विगतका दिनहरू मेरो स्मृतिपटलमा द्रविभूत हुनपुग्छन् । आजको समाज निकै पराआश्रति भएछ । मान्छै परजीवि बन्दै गएको छ । मान्छे आफ्नो पौरखलाई विश्वास गर्दैन । अनि ‘सर्टकर्ट’मा मान्छे उपलब्धि हासिल गर्न खोज्छ । विगतका मेरा दुःख, वेदनाहरूलाई त्यस केटासँग तुलना गर्न खोज्छु । आकाश जमिनको फरक पाउँछु ।
अनायासै, चिसो हावाले मलाई फेरि एकचोटी स्पर्श गर्छ । म पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्छु सडकहरू अब मानवविहीन भइसकेका छन् । सडक बत्तीहरू पनि मलाई मधुरो लाग्छ । एक्कासि मानसिक सन्तुलन गुमाए जस्तो देखिने मान्छे मेरो नजिक आइपुग्छ । आफूसँग भएको चिउरा चपाउन थाल्छ । स्तब्ध छ ऊ । मलाई बोलाउँदैन । आफैँमा पूर्ण छ ऊ । ऊ के गर्छ म अड्कल काट्न सक्दिनँ । ऊ आफ्नै धुनमा मस्त छ ।
म आफ्नो ल्यापटपमा ‘मेल’ चेक गर्न हतारिन्छु । इन्टरनेटको गतिले मलाई निन्द्रा लगाउँछ । भारतमा हुन गइरहेको गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठिमा मलाई वक्ताको रुपमा आमन्त्रण गरिएको रहेछ । यथासक्य चाँडो मैले आफ्नो विचार प्रेषित गर्नुपर्ने रै’छ ।
‘सयौं थुङ्गा फूलका….नेपाली….’ अनायासै मेरो मोबाइल बज्छ । श्रीमतीको फोन आएको रैछ । कानका श्रीमतीको स्वर गुन्जिन पुग्छ -“हैन यतिखेरसम्म कहाँ हराएको ? आज छोरीको बर्थ-डे होइन ? छोरी पर्खिरहेकी छे । झट्ट आउनु यहाँ !”
Posted in Rajesh Natansh
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Rajesh Natansh Literatures of Nepali Story Writer Rajesh Natansh Nepali Author Rajesh Natansh Nepali Katha Nepali Katha Mera Patraharu Sanga Ko Raat by Rajesh Natansh Nepali Kathakar Nepali Kathakar Rajesh Natansh Nepali Rachanakar Kathakar Rajesh Natansh Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Rajesh Natansh Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Rajesh Natansh Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Mera Patraharu Sanga Ko Raat by Rajesh Natansh Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Rajesh Natansh Rajesh Natansh - Mera Patraharu Sanga Ko Raat Rajesh Natansh's Nepali Story Mera Patraharu Sanga Ko Raat Sahityakar Rajesh Natansh Ka Nepali Katha Haru